Sago Mini ကိုကမ္ဘာ့ဖလား | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sago Mini ကိုကမ္ဘာ့ဖလား
Sago Mini ကိုကမ္ဘာ့ဖလား APK ကို
သငျသညျ, အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမယ့်သစ်တောမှတဆင့်ပျံသန်းတစ်ဦးစက်ရုပ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နဂါးဒီဇိုင်းတစ်ခု firetruck မောင်း, ရေနက်ငုပ်တစ်စူပါဟီးရိုးဖြစ်လာ, သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ပိုပြီးလာရောက်လည်ပတ်အဖြစ် Harvey, Jinja, ရော်ဘင်နဲ့ Jack နှင့်အတူခရီးသွား - whimsical တဦးတည်းအတွက်အားလုံး ကမ္ဘာကြီးကို။
ယနေ့ New York Times, Guardian သတင်းစာနှင့် USA တွင် Featured
"သူတို့ apps များအားလုံးသည်သားသမီးတို့အဘို့တစ်အားရစရာဖြစ်ကြသည်။ " - ဂါးဒီးယန်း
•စက်ရုပ်ပါတီ (ကလေးများနည်းပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှုဆုချီးမြှင့် 2016)
•လမ်းမကြီးခရီးစဉ် (မိဘရဲ့ရွေးချယ်မှု - ရွှေ 2016)
•ကလေး (Webby ရဲ့ - Honoree)
• Monsters (တစ်နှစ်တာ၏ Cinekid App ကို - Runner Up ကို)
သီးသန့်: Sago Mini ကိုမေးလ်!
သင့်ထံစာရောက်နေပါတယ်! သူတို့ဖမ်းယူခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Adventures share အဖြစ်ဇာတ်ကောင်ကနေပုံမှန်စာပေးစာယူကိုရယူပါ။
• Wi-Fi သို့မဟုတ်အင်တာနက်မပါဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဂိမ်း Play
•သီးသန့်အကြောင်းအရာ, လစဉ် updated
•သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကနေပုံမှန် update ကိုရယူပါ
• 2-5 အသက်လေးတွေအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
•အဘယ်သူမျှမ Third-party ကြော်ငြာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်-app purchase
သင့်ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်, သင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေအဖြစ်အဘို့, app ကိုအတွင်းအားလုံးဂိမ်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမှန့်အသတ် access ကိုရလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးချင်းစီသက်တမ်းတိုးနေ့စွဲ (ဟုတ်မဟုတ်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်) မှာသင့်အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်စာရင်းသွင်းထားသောအခကြေးငွေကောက်ခံပါမည်။ သငျသညျအလိုအလျှောက်တရားစွဲဆိုခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့လိုပါကရုံ '' အော်တိုသက်တမ်းတိုးရန် '' သင့်ရဲ့ Account Settings ကိုမှခေါင်းနှင့်ကို turn off ။
သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားကြေးသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုမဆိုအသုံးမပြုဘို့ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ )
သငျသညျ, အကူအညီလိုမေးခွန်းများကိုရှိသည်, သို့မဟုတ် 'hi' 'လို့ပြောချင် -If, worldsupport@sagomini.com မှာအဆက်အသွယ်ရ
Sago Mini ကိုသင့်ရဲ့ privacy နဲ့သင့်ရဲ့သားသမီးများ၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျူးလွန်နေသည်။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းသင့်ကလေး၏အချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်ဖြစ်သော COPPA (ကလေးများအွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်း) ကထွက်သတ်မှတ်တင်းကျပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များ, လိုက်နာ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝ privacy ကိုမူဝါဒအဖတ်ပါ။
Instagram ကို: @sagomini
Facebook မှာ: Sago Mini ကို
ဂိမ်းအသစ်: Sago Mini ကိုလေဆိပ်ဒါဟာအားလပ်ရက်အချိန်နှင့်သင့် Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများကိုစောစောလေဆိပ်မှရတယ်။ သူတို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းကံကောင်းတာကလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်! အိတ်အဆိုပါပေါ်ကိုခါးပတ်ပေါ်သွား Watch, လုံခြုံရေးအားဖြင့်သင်တို့၏ဥစ္စာစစ်ဆေးနှင့်မိုးလုံလေလုံကစားကွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကလေယာဉ်ပြေးလမ်းမှဦးခေါင်း takeoff များအတွက်အချိန်နှင့်သင့်စီးနင်းကောက်လိုက်တဲ့အခါ - သင်အဖွဲ့သည်ရဟတ်ယာဉ်သို့မဟုတ်ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ်ရှိပါသလဲ
သစ်အပြင်အဆင်: နွေရာသီဖုန်သူတို့အားလှန်လာသောသေတ္တာကိုချွတ်နှင့်သင့်ပြန်သုံးနိုင်သောကောက်ရိုးများကို ပြင်ဆင်. - နွေရာသီကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်!
335.77 ကို MB